Maqaa Qeerrootiin guddoo nagadamaa jira – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMaqaa Qeerrootiin guddoo nagadamaa jira
Yaya Beshir, Adoolessa 25, 2021
Maqaa Qeerrootiin guddoo nagadamaa jira. Kan nagadu ammoo warruma kaleessa waggaa 27f Qeerroo diinomfatee ajjeesaa fi hidhaa, gariis biyyarraa ariyaa bahe, OPDO dha. Har’a lubbuun hudha geenyaan qabsoo kaleessa Qeerroon sirna isaanii ofirraa kaasuuf Oromiyaa irratti taasisee injifate zakkaruutti ka’an. Akka waan kaleessas fira Qeerroo turaniitti har’a afaan ajaawaa saniin yoo maqaa kanaan nagadan hin qaanfanne.
Dhugaa tokko garuu irra deebinee ifa goona. Qeerroon kaleessa kan qabsaayee injifate olaantummaa sirna kamiiyyuu Oromiyaa irratti hin hayyamu jedheeti. Kan isa hidhaa fi ajjeesaa ture warruma Afaan Oromoo dubbatu OPDO Oromiyaa irratti gooftaa turtee dha. Qeerroon TPLF qofa miti kan lolate. Warra TPLF caalaa TPLF turan OPDOs walitti qabee ofirraa buusuuf lubbuu kumoota gabbare. Qabsoo sanaan TPLF harka kennatee Finfinnee dhiisee Tigraayitti gale. OPDOn garuu tiruu ishee ganda Olii jala galuun (gooftaa jijjiirrattee) deebitee Qeerrootti diinomte. Afaan Oromoo dubbattee fira fakkaattee nu nyaatte. Hogganoota Qeerroo badhaasaa fi ulfinni maluuf salphifte. Ajjeefte, hiite. Oromiyaa diigdee Oromummaa abaartee olaantummaa saba tokkichaa kan kaleessa moohame boollaa baaftee faaruu tokkicha waliin faarfatte.
Kanaafuu yeroo kanatti diinni Qeerroo innikkaan OPDO dha. TPLF Finfinnee irraa ka’ee qehee isaatti gale achitti dhaqanii ristii irraa barbaaduu fi haadholii Tigraay gudeeduun akeeka Qeerroos tahee kan ummata Oromoo walii galaa miti. Oromoon yakka sirna bittaa waggaa 27 keessatti isarratti raaw’atame warra dhimmi ilaalu kamuu waliin ni herregata. Haa tahu malee daangaa ofii darbanii qehee namaa dhaqanii wareegama bilaasha kafaluu fi roorroo ofii jibban saba biraa irratti raaw’achuun kaayyoo keenya dha jedhee hin yaadu. Qehee namaatti duulanii ristii gaafachuu fi haadholii fi daa’imman irratti roorrisuun kaayyoo warra Ristee fi ergamtoota isaanii OPDO malee kaayyoo Qeerroo fi ummata Oromoo miti. Garaagarummaan keenya guddaan asirratti natti fakkaata. Qeerroon dhugaan qehee isaa Oromiyaa kan ammas roorroo biraa jalatti kufe ulfina itti horuuf wareegama kafalaa jira. Kan maqaa Qeerrootiin biyya namaatti wal duulchisaa jiru warra isa ergate mooji!